Jowhar.com : Somali Leader News - News: Ciidamada huwanta oo la sheegay inay ku sii siqayaan degmada Baardheere ee Gobolka Gedo
April 23 2014 07:40:20
Ciidamada huwanta oo la sheegay inay ku sii siqayaan degmada Baardheere ee Gobolka Gedo
Wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in xaalad kacsanaan ah ay ka jirto degmada, kadib markii laga war helay in ciidamada huwanta ay ku soo wajahan yihiin.
Xoogaga Al-Shabaab ayaa ka wada degmada dhaq dhaqaaq ciidan, waxaana dadka deegaanka ay bilaabeen inay isaga barakacaan, ka hor inta aanay degmadu ku soo dhowaan ciidamada huwanta ah.
Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay u jiraan Baardheere wax ka yar 20-KM.
Dad ku sugan Baardheere ayaa sheegay in Al-Shabaab ay bilaabeen dhaq dhaqaaq ciidan, iyadoo dhowr ka mid ah gaadiidka dagaalka ay u baxeen duleedka, si ay difaac uga galaan, inkastoo aan la ogeyn inay isaga bixi doonaan iyo in kale.
Ciidamada Itoobiya ee dhowaan ka mid noqday howl galka AMISOM ayaa duulaan ku ah deegaanada Shabaab kaga sugan yihiin Gobolada Gedo, Bay iyo Bakool, waxaana dowladda Soomaaliya horay u sheegtay in sanadkan Shabaab ka saareyo dhamaan gobolada dalka.
Baardheere ayaa la sheegayaa inay ka aheyd saldhigii ugu weynaa Al-Shabaab ee Gobolka Gedo, iyadoo degmadan iyo Buurdhoobo ay ahaayeen labada degmo ee ay kaga sugnaayeen Gobolka.
Al-Shabaab ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay culeys milateri uu ka soo wajahayay Gedo iyo Bakool, halkaasoo looga qabsaday degmooyin ay in muddo ah gacanta ku hayeen, waxaana ugu dambeysay degmada Buurdhuubo ee Gobolka Gedo oo Sabtidii la soo dhaafay laga saaray.
Maalmihii u dambeeyay ayaa Al-Shabaab waxaa gacantooda ka baxay, degmooyinka Waajid, Xudur, Buurdhuubo, iyadoo Taliska AMISOM ay sheegeen in ilaa shan magaalooyin ka qabsadeen.
master on March 12 2014
0 Comments · 2802 Reads
Jowhar.com723,155 unique visits